Ukubuyekezwa kwe-AVG VPN (2020) - Ingabe Uyakudinga Ngempela Lokhu? - Buyekeza
I-Virtual Private Network (VPN) ikhule ngokuthandwa eminyakeni yamuva. Izindaba ezimayelana nokuhweba kwedatha okuvela eceleni kanye nesikhangiso esinamandla okuxhashazwa kwangasese kuholele kubantu ukuthi bathuthuke. I-VPN ngokungangabazeki iyisibusiso kubantu abaku-inthanethi.
Phakathi kwala ma-VPN, kukhona okugqamile ngenxa yegama layo nokwethembeka, i-AVG VPN. Manje, uma ubungazi, i-Avast ithole i-AVG ngo-2016, kepha amayunithi amabili asebenza ngokwehlukana. Kodwa-ke, i-AVG VPN inokufana okuningana ne-Avast's VPN (SecureLine).
Uma uzibuza ukuthi ngabe iseva ye-AVG ikufanele ukuthola noma cha, lokhu kubuyekezwa kuzokulethela ulwazi olunzulu. Ifaka izinto ezibalulekile okufanele uzicabangele ngaphambi kokuthenga i-VPN futhi wenze isinqumo esifushane ngaleyo ndlela.
Ufuna amadili amahle we-VPN? Hlola NgoLwesihlanu omnyama i-VPN Thenga kusuka ku-NordVPN ne-ExpressVPN.
I-AVG VPN - Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwazo zonke izici
Ngaphambi kokungena kusibuyekezo, cabanga nge-AVG njengomhlinzeki oyisisekelo we-VPN. Ayinazo izici eziningi ezihehayo eseziyinto evamile kubahlinzeki be-premium abaningi noma abajwayelekile. Kodwa-ke, ine-interface yomsebenzisi elula nokuhlelwa okulula ngenxa yokushoda kwezici eziyinkimbinkimbi.
I-AVG njengamanje inamaseva angaphezu kwezi-55, futhi iyatholakala emazweni angama-37. Uma uyiqhathanisa nama-VPN agcwele futhi aqavile njengeNord, i-AVG ayimi ethubeni. Kodwa-ke, lokhu kubuyekezwa kugxile ekuhloleni ukusebenza kwe-AVG nenani layo lilonke ukukusiza uthathe isinqumo. Ngakho-ke, ngeke uthole ukuqhathanisa okuningi kepha ukuhlaziywa okuphelele kwensizakalo ye-VPN.
I-AVG inenzuzo ebalulekile yokuba ngumhlinzeki we-VPN owaziwa kancane. Noma kunjalo, lihlotshaniswa negama elikhulu. Ngakho-ke, kuthambekele ekutholeni iGeolocked ngokushesha. I-geolock yilapho umhlinzeki wesevisi (Iwebhusayithi, uhlelo lokusebenza, njll.) Enquma ukuvimba iseva yomhlinzeki we-VPN. Ama-VPNs asebenza ngokuyinhloko ngokukuxhumanisa neseva kusuka endaweni ehlukile.
Cishe wonke umhlinzeki we-VPN usebenza ngokuzikhandla ekwakheni amaseva amasha ukuletha isivinini esikhulu. Sonke sifuna isivinini esisikhokhelayo, kepha i-VPN idinga ukuphindiselwa komzila koxhumano lwakho ngeseva ehlukile. Imvamisa, kusho ukuthi kuzoba nokushoda kwejubane. Kwesinye isikhathi igebe lingabonakala.
I-AVG impela iyaxega kulo mnyango. Amaseva ayo mahle esifundeni saseYurophu, ngokulungiswa kwejubane okungu-90%. Endaweni yaseNyakatho Melika, igcina cishe i-75% yejubane. Noma kunjalo, amaseva kunoma yiliphi elinye izwe nesifunda anokuhluka okukhulu ngejubane, cishe u-10-25% walokho ongakuthola okuphezulu.
Lesi sivinini sisalungele ukusakaza noma ukulanda okuqukethwe . Kodwa-ke, ngeke ikuvumele ukuthi ube nokuningi kokuthola imisebenzi eminingi ngosizo lwamanye amaseva. Ngakho-ke iyahamba lapho.
2. Umjaho Wokuqukethwe
Ukusetshenziswa okuyinhloko abantu abaningi abanakho kwe-VPN ukufinyelela okuqukethwe okuvinjelwe noma okuvinjelwe. Ungenza izinqumo, futhi unelungelo lokubuka noma yikuphi okuqukethwe okuthandayo. Kodwa-ke, abahlinzeki abaningi bezinsizakalo zokusakaza noma ohulumeni babeka ibhendi noma umkhawulo kulokhu okuqukethwe.
I-VPN ikuvumela ukuthi usakaze lokhu okuqukethwe. Ake sibone ukuthi i-AVG ihamba kahle kanjani ekufinyeleleni okuqukethwe kuzingxenyekazi ezahlukahlukene.
3. Ukusakaza Okulula
Ngaphandle kokushoda kwamaseva, i-AVG inokufinyelela okuncomekayo kwensiza yokusakaza. Ungavula i-Netflix noma olunye uhlelo lokusebenza oludumile futhi usakaze indawo yangakini. Isikhathi esiningi, kushaya umoya, futhi uzokwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwe-premium.
Kodwa-ke, uma i-AVG ingatshali mali ekwakheni amaseva azinze kakhudlwana, kungenzeka kakhulu ukuthi ibe yinjongo yezinkampani ezinkulu ukukhiya amaseva. Okwamanje, ingomunye wabahlinzeki be-VPN abazinze kakhulu ekusakazeni okuqukethwe ku-inthanethi. Njengoba usuvele uyazi, inikezela ngejubane elifanele lokuxhumeka kwakho, noma ngabe inamaseva angenzi kahle.
4. Isifufula nge-AVG VPN
I-AVG isebenza kahle ngokungalindelekile maqondana nezifufula futhi isungula ukuxhumana. Kodwa-ke, kunokuntuleka kokudluliselwa kwetheku, ngakho-ke lokho akuqinisekisi kancane. Ukuxhumeka kontanga kuya ne-AVG, futhi lokho kuyahambisana nabanikezeli bezinsizakalo ze-premium abaningi be-VPN. Ngakho-ke, ufuna ukwelashwa ngokugqama kwe-AVG kulesi sigaba.
Kodwa-ke, ukuntuleka kwamaseva nokufinyelela kusengadala uhlobo oluthile lokubuyela emuva. Akwanele ukukuhlehlisa kepha kungadinga ukuthi uphequlule ngaphambi kokukhetha isiphakeli.
5. Ukuphepha Kwezobuchwepheshe
I-VPN enhle kufanele ikulethele ukuphepha okuhle kakhulu. Lelo iphuzu lokuthengisa elikhanga kakhulu le-VPN njengoba linciphisa izinsongo ezingaba khona ekuxhumekeni kwakho. Ngaphambi kokusebenzisa insiza ye-VPN, kubalulekile ukuthi ubheke izici zayo zokuphepha.
Ukusakaza nokuqukethwe kulungile, kepha kulapho uzoba nomehluko omkhulu. Nasi ukubuka konke okusheshayo kokuphepha kwe-AVG:
Inokubethela okungama-256-bit, okuphawuleka kakhulu maqondana nezokuphepha, ikakhulukazi nge-OpenVPN. Kodwa-ke, icaciselwe i-PC, futhi amanye amadivayisi awanakho lokhu kubethela. Ngakho-ke, kuyisinqumo esihle uma ufuna lokhu kuvikeleka ku-PC yakho, kodwa ngeke kuhambisane kahle nama-smartphone.
Ukuntuleka kwe-smartphone nokunye ukubethela kwedivayisi emhlabeni onobuchwepheshe obunomshini omkhulu wedijithali ngokuqinisekile kubeka amaligi e-AVG ngemuva kwabanye abahlinzeki be-VPN.
Asikho i-adblocker kuhlelo lokusebenza lwe-VPN. Ukushoda kwezici kuqinisekisa ukuthi uzothenga isiphequluli sewebhu se-AVG esiletha amandla okuvimba izikhangiso. Akukho ukuxhaswa kwe-anti-malware noma. Ngamazwi alula, i-AVG ayinakho ukuphepha okuyisisekelo kakhulu abanye abahlinzeki bezinsizakalo ze-VPN abangakunika kona.
8. Amarekhodi ezincwadi
Abahlinzeki abaningi be-VPN balethe inguquko entsha yokungagcini idatha yomsebenzisi nhlobo. Akukho ukugawulwa, futhi abanye baze banikeze ukulawula kubasebenzisi. Unganquma ukuthi uyafuna amarekhodi akho ezingodo noma cha, futhi lezi zizogcinwa ziphephile. I-AVG ayinayo enye yalezi zinketho.
Akuqapheli umsebenzi wakho we-intanethi kodwa ngokuqinisekile ugcina izingodo. Uxhume nini, usebenzise i-bandwidth engakanani? Lonke lolu lwazi lungene ngemvume kuze kube yizinsuku ezingama-30. Ngamanye amagama, yize ingeyona ingozi, i-AVG igcina ikhiya. Ngakho-ke, ayithembekile njengamanye ama-VPN emakethe.
Ukuhambisana kwe-AVG VPN:
I-AVG VPN itholakala ngokuyinhloko ngamawindi uma ufuna ukufinyelela ukuvikelwa kwayo okuphelele nezici, noma kungekho okuningi kwayo. Iyatholakala kuma-Smartphones nakwamanye amadivayisi, kepha ingumngcele oyisisekelo futhi iyasebenza ngokushesha nje lapho uyifaka kudivayisi yakho.
Ngeshwa, ayinakho ukuhambisana nama-routers, ama-consoles wokudlala, noma i-smart TV. Ngisho nabasebenzisi beLinux kufanele basethe i-VPN bese beyifaka ngesandla. Sekukonke, i-AVG inezinga lokuhambisana eliphansi. Ifanele amawindi kakhulu.
Isivivinyo samahhala se-AVG VPN Premium VS AVG VPN:
Akukho lutho lwamahhala olubi, futhi okufanayo kuyasebenza kusevisi ye-VPN, inqobo nje uma inenkampani ye-premium esekela ikhwalithi. Abanye abahlinzeki bezinsizakalo ze-VPN banikela ngesivivinyo sezinsuku eziyisikhombisa ngokusemandleni. Kungenzeka kunganele abantu abaningi ukunquma amandla wensizakalo ye-VPN.
Okwamanje, i-AVG VPN ikulethela isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 esidlula ezinye izilingo. Kukunika isikhathi esanelisayo ukunquma ukuthi ngabe le VPN ingeyakho noma cha. Uthola ukufinyelela okuphelele kuzici ze-premium nezinsizakalo. Kodwa-ke, akukho okuningi ngakho.
1. Inani Lemali
Uma ukhuluma ngezindleko zangempela zokubhalisa nenani lemali, i-AVG ayifanele. Okungenani, ihlehla kahle kakhulu uma iqhathaniswa nabanye abahlinzeki abadlangile. Inamaphakheji wokubhalisa abiza kakhulu abahlinzeki be-VPN abasezingeni eliphakeme. Ngakho-ke uma ufuna ngempela ukubhalisa, kungcono ukuthi ubheke amanye ama-VPN.
2. Inqubomgomo Yokubuyiselwa Imali
Kukhona inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali ye-VPN yezinsuku ezingama-30. Uma unganelisekile, ungacela ukubuyiselwa imali zingakapheli izinsuku ezingama-30. Asikho isimo esifihliwe noma umkhawulo womkhawulokudonsa ongawusebenzisa ngokufanelekela ukubuyiselwa imali noma. Uma unganelisekile, uzothola imbuyiselo.
3. Ukuxhaswa Kwamakhasimende
Ukusetshenziswa kwamahhala, insizakalo yamakhasimende ayenelisi njengoba unenketho yengxoxo ngokuhamba phambili exhunywe kwimpendulo ye-bot. Kungu-24/7 kepha akukufanele, kwanele ukuqoqa imininingwane. Uma ufuna ukwesekwa kwesikhathi sangempela, kufanele ubhalisele izinsizakalo. Ukunakekelwa kwamakhasimende kubaxhasi be-premium grade kungcono.
Uma ufuna insizakalo eyisisekelo ye-VPN, khona-ke i-AVG izowenza lo msebenzi, kodwa ngokuqinisekile ayifanele imali ngalo mzuzu. Kube nezikhalazo ezithile ezivela kubasebenzisi maqondana nokuxhuma. Kungenxa yokushoda kwamaseva. Ngaphandle kokuthi inkampani ikwazi ukukhula, ngeke ihambe kahle, futhi kunezinketho ezingcono zama-VPNs we-premium-grade.
Inkampani izama ngamabomu ukukuthengisela i-combo yesoftware ehlukahlukene nezinsizakalo ongazithola ekubhaliseni okukodwa kusuka kwabanye abahlinzeki be-VPN. Uma ufuna i-VPN esebenza e-China, i-VPN nayo izokwehluleka lapho. Akufanele imali, futhi kufanele ucabangele abanye abahlinzeki.
Kodwa-ke, uma ufuna ukujabulela isivivinyo sezinsuku ezingama-30 se-VPN ehloniphekile esikhundleni sama-VPN amahhala angathembekile atholakala emakethe, senza umsebenzi oncomekayo. Ayinazo izici eziningi kodwa i-interface eqondile. Sekukonke, i-AVG akuyona i-VPN ehamba phambili emakethe. Noma ungayiqhathanisi namanye ama-VPN, ayinikezi okuningi ngensizakalo esezingeni le-premium.
I-VPN ehamba phambili yeFireStick (2020)